-Wifi भन्दा पनि फास्ट इन्टरनेट lifi आउदै हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) - Online Tamang
-Wifi भन्दा पनि फास्ट इन्टरनेट lifi आउदै हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
डिजिटलको दुनियाँमा नयाँ इन्टरनेट सेवा आउने भएको छ। वाईफाई भन्दा सयौ गुना तिव्रगतिको इन्टरनेट सेवा भारतले परीक्षयण गरिरहेको छ। नयाँ इन्टरनेट लाईफाईले एलईडी बल्ब मार्फत पनि काम गर्न सक्छ। एउटा प्रतिवेदन अनुसार भारत सरकारले परीक्षण गरिरहेको यो प्रविधिलाई छिटै प्रयोग ल्याउन सकिने छ। फाइबर नभएको स्थानमा लाईफाई प्रयोग ल्याउन सकिने छ। सुचना प्रविधि मन्त्रलायले लाईफाई पाईलट प्रोजेक्टमा परीक्षण गरिरहेको छ।
विश्वमा यस्ता यस्ता आविष्कार भए जुन देखेर तपाई बिश्वाश गर्नुहुदैन (भिडियो सहित) पुरा हेर्नुस
के तपाई मोबाइल ह्यांग हुन्छ ? यस्तो गर्नुस् कहिल्यै ह्यांग हुदैन
भोली र पर्सी देशैभर मौसम बदली हुने, यस्तो भन्छन मौसम बिद
फेसबुक प्रयोगकर्ताको लागि फेसबुकले गर्यो नयाँ नीति सार्वजनिक !
-१४९ यात्रु बोकेर ३० हजार फुट उचाइमा उडिरहेको बिमानमा बिष्फोट
बैशाख ७ गते बाट शुक्रग्रहले आफ्नो राशी परिवर्तन गर्दै, यी राशिहरुमा पर्नेछ यस्तो असर
Prev-श्रीमतीसँग झगडा परेपछि,म त बाँच्दिन भनेर फोन राखेको केहीबेरमा कतारमा क्रेनमा झुन्डिएर यस्तो गरे जिबनले (भिडियो सहित)
Next-रबीले कार्यक्रममा देखाएपछी झन बढ्याे भुतकाे त्रास -पिडीतकाे बयान
-जीवनसंग सम्बन्धित प्रसिद्ध १०० भनाइहरु, एक पटक पढ्नुहोस तपाईको जिवनमा अवश्य परिर्वतन ल्याउछ (7)
-देवरसँग मेरो पहिलो एक रात, यौन कथा मेरो सत्य यौन कथा! (5)
हस्त रेखाबाट यसरी थाहा हुन्छ भविस्य तथा आचरण र जीवनी(जान्नुहोस् , बुझ्नुहोस्) (4)
कोलगेटले गर्दो रहिछ यस्तो काम जुन तपाईलाई सायद थाहाछैनहोला (4)